किन पर्छ अनुहारको छाला चाउरी ? चाउरी पर्नबाट बच्न खानुहोस् यी खानेकुरा – mero sathi tv
किन पर्छ अनुहारको छाला चाउरी ? चाउरी पर्नबाट बच्न खानुहोस् यी खानेकुरा
On २१ चैत्र २०७४, बुधबार १५:३७
यसबाहेक छालामा चाउरी पार्ने प्रमुख कारण घाम नै भएकाले छालामा कोलाजेन कायम राख्ने र घामको प्रभाव घटाउने खानेकुरा उपयोगी हुन्छन् । केही खानेकुरामा पाइने प्mयाट पनि छालाको मोस्चराइजर कायम राख्न आवश्यक हुन्छ ।
अन्य खानेकुराको तुलनामा गेडागुडी सस्तो, विविध भिटामिनयुक्त र पकाउन सजिलो हुन्छ । एकै खालको गेडागुडी खानुभन्दा धेरै खालका रंगीन मिसाएर खानु उपयुक्त हुन्छ । दिउँसोको खाजामा गेडागुडी र बदामसमेत समावेश गर्नु राम्रो हुन्छ । सातामा २÷४ पटक गेडागुडी खाए छालाका लागि पर्याप्त पोषण प्राप्त हुन्छ । बोडी, सिमी र दाल सातामा केही पटक खाने गरे प्रोटिनका लागि बेग्लै खानेकुरा खाइरहनु पर्दैन ।
भिटामिन ए युक्त खानेकुरा
भिटामिन ए छालामा दुई तरिकाले उपयोग हुन्छ । पहिलो भोजनबाट पाउने र अर्को क्रिम (रेटिनोल) का रुपमा सीधै छालामा लगाउने । यो क्रिम चर्मरोग विशेषज्ञले प्रेस्क्राइब गर्छन् । तर, तपाईंले प्रचुर भिटामिन एयुक्त खानेकुरा खाएपछि चर्मरोग विशेषज्ञकोमा जानै पर्दैन । यसका लागि हामीले दिउँसोको खाजामा केही गाजर वा ब्रेकफास्टमा दुई/तीन वटा अण्डा समावेश गरे दैनिक भिटामिन एको पूर्ति हुन्छ ।
बर्षाले पाइन् अर्को फिल्म, तर शर्तमा घेरीइन्